Dalxiiska Seychelles iyo Qatar Airways ayaa Warbaahinta Switzerland la Wadaagaya Horumarro Cusub
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Seychelles » Dalxiiska Seychelles iyo Qatar Airways ayaa Warbaahinta Switzerland la Wadaagaya Horumarro Cusub
Airlines • Aviation • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Wararka Dowladda • Warshadaha Warshadaha • News • Wararka Qadar • Dib-u-dhiska • Wararka Seychelles • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka
Dalxiiska Seychelles iyo Qatar Airways
Dalxiiska Seychelles iyo la -hawlgalaha diyaaradda Qatar Airways ayaa xoojiyay dadaalkooda ku aaddan xoojinta aragtida meesha loo socdo ee Switzerland iyaga oo qabanqaabiyay kulan ay Zurich kula yeelanayaan safarro, warbaahin iyo xirfadlayaal warshadeed Khamiistii, Sebtember 23 -keedii.
Laba dhacdo ayaa looga golleeyahay in la -hawlgalayaashu la socdaan horumarka Seychelles.
Mowduucyada waxaa ka mid ahaa tallaabooyinka amniga, soo jiidashada cusub, iyo sidoo kale wararkii ugu dambeeyay ee Qatar Airways iyo jadwalka duulimaadka ee Seychelles.
Kulamada ayaa xoojiyay joogitaanka qaranka ee suuqa waxayna u xaqiijiyeen la -hawlgalayaasha in isku xirnaanta jasiiradeeda yaryar ay diyaar tahay.
Munaasabadda shaqsi ahaan, oo lagu qabtay Savoy Baur en Ville ee Zurich, ayaa lagu soo bandhigay shir jaraa'id oo lagu qabtay quraac, iyo kulan qado ah oo soo jiitay 12 wada-hawlgalayaal warbaahineed iyo 15 maareeyayaal wax-soo-saar.
Waxaa hogaaminaya Marwo Bernadette Willemin, Agaasimaha Guud ee Suuqgeynta ee Dalxiiska Seychelles, iyo Mr. Antonio Panariello, Maareeyaha Ganacsiga Switzerland ee Qatar Airways, labada dhacdo waxay ujeedadoodu ahayd inay la -hawlgalayaashooda la socdaan horumarka Seychelles, tallaabooyinka badbaadada, soo jiidashada cusub, iyo sidoo kale wararkii ugu dambeeyay ee Qatar Airways iyo jadwalka duulimaadka ee Seychelles.
Iyada oo ka hadlaysa Zurich, Mrs Willemin waxay xaqiijisay in Dalxiiska Seychelles ay isu diyaarineyso wejiga xiga ee soo kabsashada meesha loo socdo, taas oo usbuucii la soo dhaafay ayaa diiwaangeliyay booqashadiisa 100,000 -aad sanadka.
“Iyada oo noloshu si tartiib tartiib ah ugu soo laabaneyso, tallaalku wuxuu ka socdaa Yurub, adduunka oo dhanna waa la fududeeyay xannibaadaha dhaqdhaqaaqa iyo safarka. Duulimaadyadu waxay dib u bilaabayaan adeegyadoodii iyadoo dadweynaha Seychelles ay ku raaxaysanayaan mid ka mid ah heerarka ugu sarreeya ee tallaalka adduunka, Dalxiiska Seychelles ayaa sidoo kale hadda awood u leh inay dib u bilaabaan hawlihii xayeysiinta ee jadwalkeeda. Waxqabadyo fara badan ayaa ka dhacaya dhammaan suuqyadeena. Munaasabadda maanta ka dhacday Switzerland, oo aan la kaashannay Qatar Airways, waa in la xoojiyo joogitaankeenna suuqa oo aan u xaqiijinno shuraakadayada in isku xirnaanta jasiiradeena yar -yar la heli karo, ”ayay tiri Marwo Willemin.
Antonio Panariello, Maareeyaha Ganacsiga Switzerland ee Qatar Airways ayaa yiri: “Farxad weyn bay ii ahayd inaan maanta halkan imaado oo aan xafladdan si wadajir ah u qabanno Seychelles. Xiriirka ka dhexeeya Qatar Airways iyo Seychelles waa mid xooggan oo muhiim ah. Meeshani waxay aad u danaynaysaa suuqa Swiss -ka, waana ku faraxsanahay inaan kor u qaadi doonno meeshan si wadajir ah Dalxiiska Seychelles. ”
Xagga wanaagsan, warbaahinta iyo la -hawlgalayaashii ka soo qaybgalay labada munaasabadba waxay ku ammaaneen dawladda Seychelles iyo warshadaha guud ahaan joogtayntooda iyo xirfadaha isgaarsiineed ee aadka u wanaagsan intii uu socday aafadu.
Munaasabaddu waxay daba socotaa safar saxaafadeed oo dhowaan ku soo maray Seychelles oo ay maalgelisay xafiiska Qatar Airways Switzerland oo ay taageereen wada -hawlgalayaasha hudheelka Constance Lemuria Resort, STORY Seychelles, Hilton Seychelles Northolme Resort & Spa iyo Kempinski Seychelles Resort.
Seychelles waxay dhammaystirtay dib -u -furidda xuduudaheeda booqdayaasha ajnabiga ah 25 -ka Maarso, 2021. Switzerland ayaa ilaa maanta sannadkan ku biirisay saamiga suuqa 3% ee wadarta soo -booqdaha.